Kensington 15.6" Everest Dotted Laptop Backpack | Buy online | SHOP.COM.MM
Kensington 15.6" Everest Dotted Laptop Backpack
Padded laptop compartment with microsuede tablet pouch
Laptop အိတ်မှာ လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်မှာ သေချာသော ဒီဇိုင်းပုံစံဖြစ်ပါသည်။ အနက်ရောင်ဖြစ်သည့်အတွက် အလွယ်တကူညစ်ပတ်မည်ကို မစိုးရိမ်ရသည့်အပြင် မည့်သည်အရောင် အ၀တ်အစားနှင့်မဆို တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံးနှစ်မျိုးစလုံးအတွက် အလွန်သင့်တော်ပါသည်။
Travel in style with the classic design Kensington backpacks. Padded laptop compartment and ample storage compartments let you easily access all your essential accessories wherever you go. Ergonomic back cushion and shoulder straps for extra comfort.
Specifications of 15.6" Everest Dotted Laptop Backpack